BlackBerry DTEK60 dia zava-misy ary ireo no masontsivana | Vaovao momba ny gadget
Miguel Hernandez | | Nohavaozina tamin'ny 04/10/2016 18:17 | Finday, telephony
Io BlackBerry io dia niasa mafy tamin'ny fitaovana Android izay afaka natombohany teo ambanin'ny marika nomeny dia tsiambaratelo misokatra. Na izany aza, kely na kely fotsiny no hitantsika momba an'io. Betsaka ihany koa ny voalaza fa niafara tamin'ny fanolorany tena tamin'ny fitaovana farany ambany miaraka amin'ny rafitra fiasan'i Google, saingy ny fahanginana indray no tonika mahazatra. Na izany aza, ny fivoahana avy amin'ny FCC sy ny WiFi Alliance dia miafara amin'ny fanamafisana ity fitaovana BlackBerry ity izay hahafaly ireo tia ny marika, sy ireo tia Android. Lazainay aminao hoe inona ilay tetik'asa BlackBerry vaovao, fantatra amin'ny anarana hoe DTEK60 «Argon».
Araka ny fanamarihana fanolorana dia ho tonga miaraka amin'ity fitaovana ity Android Nougat 6.0, noho izany dia heverinay fa ny fotoana niarahan'izy ireo niasa dia somary kely ihany. Raha ny pitsopitsony dia ho hitantsika ny processeur hampifanaraka, a Snapdragon 820 avy amin'ny Qualcomm fanta-daza. Hiaraka amin'ny processeur avo lenta indrindra dia hihaona ihany koa isika Fahatsiarovana RAM 4GB.
Saingy tsy misy dikany raha tsy hitantsika taratra amin'ny efijery io 5,5 santimetatra miaraka amin'ny vahaolana QHD. Ho an'ireo izay nieritreritra fa hiverina amin'ny endrika fitaovana ambany ny BlackBerry dia izao no fotoana hamafana izany hevitra izany ao an-tsainao, mazava fa hampiarahinao amin'ny fitaovana vaovao ity ny zava-drehetra. Raha ny momba ny endri-javatra sisa, tsy dia ao aoriana lavitra, efa tokony hanara-penitra ny USB-C, izay mety tsy ho hita amin'ity BlackBerry «Argon» ity, miaraka amina fakantsary aoriana tsy misy fetrany 21 MP ary ho an'ny fakantsary eo anoloana 8 MP, ny selfies dia hivadika tena tsara.
Mikasika ny vidiny, ny daty famoahana ary ny fampisehoana dia tsy afaka milaza na inona na inona izahay. Na izany aza, amin'ny maha teknisiana ahy dia tsy afaka manampy ny fientanam-po amin'ny fijerena BlackBerry manao izay tsara indrindra vitany aho hitsangana avy ao anaty lavenona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » BlackBerry DTEK60 dia zava-misy ary ireo no masontsivana
Canon dia hoy izy:
Tsy misy dikany izany ao amin'ny lahatsoratranao:
«Miaraka amin'ny fakantsary aoriana tsy latsaky ny 21 MP ary ho an'ny fakan-tsary 8 MP», fakan-tsary 2 aoriana?
Valiny amin'ny CANON
Gerald Gonzales dia hoy izy:
Tiako ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny BlackBerry dia ho iray amin'ireo voalohany mividy finday aho
Mamaly an'i gerald gonsalez
Sergio B. dia hoy izy:
Tena hividy 2 amin'ireo Blackberry ireo aho !!
Valiny tamin'i SergioB.
SRNC dia hoy izy:
Blackberry no tsara indrindra, mbola misoratra anarana amin'ny fividianana aho.
Valiny amin'ny SRNC
SpaceX dia manomboka ny fanandramana ny maotera interplanetany vaovao